Yakanakisa DROP IN ANCHOR Mugadziri uye Fekitori | Jinggong
Kudonhedza-mukati maanchor ari mukati akapetwa ekuwedzera anchor ane preassembled expander plug. Rudzi rwechibatiso runoshandiswa pakushambidza mafomu ekushandisa mune yakasimba base zvishandiso. Iyo anchor inoiswa nekutyaira yekuwedzera plug ichienda kuzasi kweiyo anchor uchishandisa yekuisa chishandiso. Kuwedzera kwakakwana uye yakanyatsogadzirirwa yakavakirwa-mukati plug inovimbisa kuwedzera kuzere kweanchor.
Aya anchor anowanikwa zinc yakaiswa kana simbi isina chinhu.
Isu takananga fekitori inogadzira ese marudzi eanchor uye mabhaudhi, nzungu, uye screws.
Isu takanga tava nehukama hwakanaka hwekudyidzana nevatengi vekunze kwenyika, sevhisi yedu yainge yasimbiswa nemutengi uye vakaisa kudzokorora mirairo mwedzi wega. Tichaburitsa nheedzano nyowani yezvigadzirwa senge isina simbi 304 uye isina simbi 316, uye isu tinoedza zvatinogona kusangana nezvinodiwa nevatengi!
Chakanakira kurongedza nzira
hombe mumakatoni + emapuranga nhovo kana zvinoenderana mutengi racho.
Chiratidzo uye zvinangwa
Tichaongorora musika wekunze uye rega zvigadzirwa zvedu zvibatsire vamwe vashandisi. Ticharamba takanamatira pazvinhu zvakanaka, kunyatsoita basa, kuongorora kwakasimba, mhando yakatendeka, kutaurwa kwakazara uye kukurumidza kuendesa, kuita mumwe wedu ave neruzivo rwekunze uye kuvabatsira mubhizinesi!
Vison uye zvinangwa
Tichaongorora kumusika kwemhiri kwemakungwa uye kurega vashandisi vaine sarudzo dzakawanda.
Pakazosvika 2021, iyo simbi isina chinhu 304 uye Stainless simbi 316 zvigadzirwa zvichaunzawo kumusika.
Mubvunzo: Unobvuma here kushandiswa kwechiratidzo chedu?
A. Kana uine huwandu hwakawanda, isu tinonyatso gamuchira OEM.
Mubvunzo: Unopa sampuli here? Iko kusununguka kana kuwedzerwa?
A: Hongu, tinogona kupa mharidzo pachena muripo asi regai kubhadhara mutengo mitoro.
A: Kubhadhara <= 1000USD, 100% pamberi. Kubhadhara> = 1000USD, 30% T / T pamberi, kwenguva yekutanga vatengi, tinogona kugamuchira L / C.
Pashure: SLEEVE ANCHOR
Kudonhedza Mune Wedge Anchor
Yakapunzika Kudonhedza Anchor
Stainless Simbi Kudonhedza Anchor